mardi, 23 novembre 2021 18:26
41 ny zanabolana efa nampakarin'ny firenena afrikanina
Maro ireo firenena afrikanina no tsy te hanofa zanabolana intsony amin'ny fifandraisan-davitra, ny fanaraha-maso ny tany sy ny toetrandro, ny fampiasana zanabolana amin'ny fandriampahalemana sy ny fambolena ary fiompiana sy ny jono, ka dia ny vaha olana ny mampiakatra zanabolana manokana ho azy.
Afrika atsimo, Algérie, Angola, Éthiopie, Ghana, Kenya, Maroc, Nigeria, Rwanda ary Soudan ankehitriny no efa manana ny azy.
Ny japoney dia manolo-tanana ampiakatra zanabolana afrikanina maimaimpoana raha maka ny nano-satellites any aminy, izany hoe zanabolana vaovao izy ity, kely nefa mora vidy.
Ny Orinasa suédoise AAC Clyde Space, dia efa nanao toeram-pamaharana ao Afrika atsimo ihany koa amin'io teknolojia vaovao io, satria vinaniana ho tafakatra 110 eo ny zanabolana hakarin'ny firenena afrikanina miisa 19 hatramin'ny taona 2024, raha mbola 41 izany zanabolana izany ankehitriny.
Heverina ho tafakatra 10 milliards de dollar USD eo ny tsenan-janabolana hatramin'ny taona 2024 aty Afrika.
(Sary nindramina zanabolana Ghanasat I)
Efa ahitana trangan’aretina fivalanana mahazo ny omby ao amin'ny Distrika Arivonimamo, Faritra Itasy ankehitriny raha toa ka tao Antsirabe II, Vakinankaratra no niandohany iray volana lasa izay.
Mivalana mipiriritra be ny omby voany, hoy ny tantsaha mpiompy ; mahia andro aman’alina, ary misy maty mihitsy izay tsy voavonjy ara-potoana.
mardi, 23 novembre 2021 14:19
Madagasikara : Voaporofo indray ny maha « plaque tournante » ny zava-mahadomelina azy
Saron’ny Zandarimaria Atsinanana ny "cocaïne de base" milanja 600 kg, taorian’ny fitsongoana dia sy fikarohana nataon’ny Zandarimaria Faritra Atsinanana sy ny Sampana fikarohana heloka bevava Antananarivo, rehefa nahazo vaovao mari-pototra momba ny fisiana siramamy mampiahiahy izy ireo tamin’ny volana aogositra 2021.
Ny 03 novambra 2021 no sarona ireo gony miisa 18 izay nisy siramamy sy zava-mahadomelina mahery vaika milanja 600 kg.
Fantatra fa mandalo fotsiny eto Madagasikara ireto zava-mahadomelina ireto fa efa fantatra ny toerana saika handefasana azy.
Olona iray izay fantatra fa mpiray petsapetsa amin'io raharaha io no voasambotra ka naiditra am-ponja vonjimaika rehefa natolotra ny Fitsaràna. Mbola karohina kosa ny namany izay eritreretina ho tena ati-doha nikotrika ity trafika ity.
Niakatra fampanoavana i Randrianirina Jasmin Emile, talen'ny PBZT (Parc Botanique et Zoologique de Tsimbazaza) omaly alatsinainy 22 novambra 2021 teny anivon'ny fitsarana miady amin'ny kolikoly (PAC), ka dia nidoboka eny Antanimora ity tale ity.
Fanodinkodinam-bolampanjakana, fanomezana tombondahiny olom-pantatra, ary fanamparam-pahefana (Détournement de deniers publics, favoritisme, abus de fonction) no iampangana azy.
mardi, 23 novembre 2021 11:05
Fitantanana ny teti-bola fanamboarana fotodrafitrasa : 90.21% ny an'ny foibe
Nahitana fidinany kely ny fitantanana teti-bola fanamboarana fotodrafitrasa ny taona 2020, izay 90.21% tantanan'ny fitondrana foibe, ary 9.79% kosa no tantanan'ny faritra 22, raha 92.86% izany teti-bola aty amin'ny foibe izany ny taona 2019.
I Betsiboka, Androy, Ihorombe no mitana ny laharana fahatelo farany, izay latsaky ny 0.15% avy.
Analamanga, Atsinanana, Boeny kosa no mitana ny laharana telo voalohany, manodidina ny 1% avy.
Mbola resaka ambava izany hatreto ny filazana fa eny anivon'ny Faritra no ametrahana ny fahefana hanapaka sy hitantana ny fampandrosoana ao aminy.
Ny tetibola ho an'ny taona 2022, izay dinihin'ny Parlemanta, ity faran'ny taona ity moa, dia mbola ahitana ny fitohizan'izay ampihimamba ataon'ny fitondrana foibe izay hatrany.
mardi, 23 novembre 2021 07:57
Parc Tsimbazaza : Nofoanana ny fanomezam-pitantanana ho an'i Groupe Axian
Taorian'ny fihaonan'ny solotenan'ny mpiasan'ny PBZT (Parc Botanique et Zoologique de Tsimbazaza) tamin'ny Sekretera jeneralin'ny Ministeran'ny Fampianarana Ambony sy Fikarohana Ara-Tsiansa ny 18 novambra 2021, dia tapaka fa foanana ny hanomezana ny fitantanana ny Parc Tsimbazaza ho an'ny Groupe Axian.
(Sary : Vina ny hanomezana ny fitantanana ny PBZT ho an'ny Groupe Axian)